विल्सन बिक्रम राई उर्फ ‘तक्मेबुढा’ के गर्दैछन् बिहे ?? (भिडियो)
गफगाफ- कुनै समयको सर्बाधिक सफल चलचित्र ‘साथी’ बाट नेपाली कलाकारितामा प्रवेश गरेका विल्सन बिक्रम राई उर्फ ‘तक्मेबुढा’ लाई अहिलेका चर्चित कलाकारको रुपमा लिईने गरिन्छ । चलचित्र ‘साथी’ मा बाल कलाकारको अतिथि भूमिका निभाएर कलाकारितामा पाईला टेकेका राई पछिल्लो केहि बर्ष यताका सफल कलाकार हरुमध्येका एक कलकार हुन् । चलचित्र अभिनयमा निरन्तरता दिने क्रममा नै चर्चित हास्य टेलीश्रिङ्खला ‘मेरी बास्सै’ मा तक्मेबुढाको रुपमा देखिएपछि राईको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो ।
हास्य टेली चलचित्र ‘मेरी बास्सै’ को उक्त ‘तक्मे बुढा’ नामक भूमिकाले राईको कलाकारितामा नया आयामनै थपि दिएको थियो । जबदेखि राई ‘तक्मेबुढा’ को नामले चिनिन थाले तब देखि उनले थुप्रै हिट चलचित्रमा समेत काम गरिसकेका छन् । यसबर्ष पनि उनका केहि फिल्महरु प्रदर्शनका क्रममा रहेका छन् । कलाकारहरुको बिहे कहिले भन्ने प्रश्न मिडिया, फ्यान तथा दर्शकहरु जो-कसैलाई पनि लाग्न सक्छ, जुन कुरा राईको सवालमा पनि लाग्नु स्वाभाविक नै हो । हामीले तसर्थपनि कुराकानीको क्रममा राईलाई बिबाह कहिले भनेर प्रश्न गर्दा उनले हास्दै भनेका थिए, ”बिहे खै यो दशैँमा भनेको’ ?? उनको यो भनाई पक्कै पनि सार्थक बनोस शुभकामना रहेको छ ।